Ginny neGeorgia - Chikonzero chebudiriro huru yeNetflix nhepfenyuro | Bezzia
Icho chikonzero chekubudirira kweakateedzana 'Ginny neGeorgia' paNetflix
Susana godoy | 06/04/2021 14:00 | Nhau
Aingova mavhiki mashoma apfuura iyo iyo akateedzana 'Ginny neGeorgia'. Kunyangwe pamwe pakutanga pakutanga zvisina kutanga seimwe yeakanyanya kufarira kuve kubudirira, zvave. Munguva pfupi pfupi yakazvimisikidza pakati peanotariswa papuratifomu.
Naizvozvo, ine akawanda mabrashrush kuti ave yako nyowani yaunofarira akateedzana. Wakazviona here? Kana zvirizvo, ipapo iwe unobva waziva chaizvo zvandiri kutaura nezvazvo uye kana zvisiri, iwe uchiri kugona kutsvaga nekuzviedza. Chimiro chekupenga chehurongwa asi hokoyo zhinji hokoyo.
1 Hukama hunowanikwa naamai vadiki kwazvo nevana vavo
2 Iyo nyaya iri kumashure kwaamai vane zvakavanzika
3 Kuyaruka nematambudziko aro
4 Ida hukama mu'Ginny neGeorgia '
Hukama hunowanikwa naamai vadiki kwazvo nevana vavo
Chokwadi ndechokuti hukama uhwo amai, Georgia, vainahwo nevana vavo chinhu chinosvetuka kunze pakutanga pekutarisa. Kunge chero amai kana baba, anovapa zvese kwavari asi ichokwadi kuti anoenderera mberi. Nekuti hukama ihwohwo hweshamwari hwatinoda tese naamai vedu kana vanasikana, izvozvi zvinoita sekuuya kuhupenyu. Zvakare, dzimwe nguva sarudzo dzemwanasikana dzinokanganisa vanhu vakuru zvakanyanya, pazvinowanzove zvakapesana. Tichawana rusununguko rwakazara maererano nehukama uye hukama hwemhuri, chimwe chinhu chatinoda kuona kubva muchiitiko chekutanga, kunyangwe zvese izvi zvichizoshandukawo. Sezvo kuseri kwehukama uhwu kune zvakavanzika zvinopfuura nerima uye zvakaoma
Iyo nyaya iri kumashure kwaamai vane zvakavanzika
Zvese zvinhu zvine poindi yemubatanidzwa uye nekudaro, muhukama hwaamai nemwanasikana, futi. Izvi zvinoreva kuti kana hukama hwakadai, huchave hwechimwe chinhu. Zvichida nekuti amai vaive nemwanasikana wavo mudiki kwazvo, vachipfuura nemamwe madrama emhuri aive achimugadzirisa munzira. Nekuti, apo mwanasikana Ginny paanoona zvinovanzwa naamai vake, haamuregerere kana zvakadaro zvinoita. Asi ichokwadi kuti kuchine zvimwe zvakawanda zvekuziva kuitira kuti uzvinzwisise. Zvakavanzika zvichaburitswa muchimiro chekusvetuka munguva. Saka kuti nenzira iyi, isu tinogona kunzwisisa nharo yacho pachayo zvirinani.
Kuyaruka nematambudziko aro
Pamusoro pezvakavanzika uye hukama pakati paamai nemwanasikana, iyo yeNetflix nhepfenyuro 'Ginny neGeorgia' zvakare ine madhirama evechidiki. Hwekutanga hukama hwepabonde, iwo rudo anouya oenda pamwe nekukosha kwehukama uye kumwe kunetseka. Zvinotaridza kuti kukwikwidzana uye kukura zvinowirirana zvachose mune akateedzana seichi. Saka a priori zvinogona kutaurwa nezveyediki nhevedzano, kunyangwe panguva ino inovhara zvakanyanya kupfuura zvataigona kufungidzira. Kune kutaura kwekumwe kufanana neumwe weakateedzana iyo nguva yadarika yakave nebudiriro huru uye hakuna mumwe kunze kwa'Gilmore Vasikana '.
Ida hukama mu'Ginny neGeorgia '
Nekuti hazvisi zvese zvaizove mutambo mu 'Ginny neGeorgia', zvakare ine inobata yemakomichi uye zvakare inoda madingindira. Chinhu chinodarika pakati paamai nemwanasikana, chimwe nechimwe chine ramangwana risina chokwadi. Kunyangwe chiri chokwadi kuti dzimwe nguva tinogona kukumbira kuti mwanasikana akura zvakanyanya kupfuura amai. Kudonha murudo pamwe chete nehukama hwepabonde hwekutanga ndeimwe yemapoinzi akakosha. Misoro inoridzwa neyakajairika hunhu uye iyo inotibatsira kuti tinzwisise hunhu hwese zvishoma zvishoma. Saka mushure mekunakirwa mwaka wekutanga, mubvunzo unobvunzwa nemunhu wese ndewokuti: Ko Netflix ichavandudza 'Ginny neGeorgia' kwemwaka wechipiri? Ndine chokwadi chekuti nekubudirira kwairi kuita, tichaziva chimwe chinhu chakanaka munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Icho chikonzero chekubudirira kweakateedzana 'Ginny neGeorgia' paNetflix